प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि छनोट गरेका न्यायाधीशहरु कोको हुन् ?Main Samachar
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासका लागि छनोट गरेका न्यायाधीशहरु कोको हुन् ?
१० पुष २०७७, शुक्रबार ११:१८ प्रकाशित
काठमाडौँ । संसद विघटनविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई आज संवैधानिक इजलासबाट हुँदै छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले उक्त रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुने निर्णय सुनाएको थियो ।
शुक्रबार संसद विघटन विरुद्ध परेका सबै रिटमा सुनुवाई हुने छ । संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीशरु रहने छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासका लागि न्यायधीशहरु समेत छनोट गरिसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटनको मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई छानेको छ।
पाँचै जनाको इजलास नं. १ मा आज संसद् विघटनविरुद्ध परेको सबै मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। यसअघि संवैधानिक इजलाशमा रहेका वरिष्ठ न्यायधीश दिपककुमार कार्की र मीरा श्रेष्ठलाई उक्त इजलाशबाट हटाइएको छ।
संसद विघटनविरुद्धको एउटा रिट भने सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिएको थियो । सर्वोच्चबाट पुगेको सहित कुल १३ वटा मुद्धामा संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्ने छ ।
गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिमार्फत संसद विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेकपा नेतासहित थुप्रै अधिवक्ताहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्चमा अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिंखडाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।